Mirongatra ny fitsaram-bahoaka any : Morondava Efatra maty, iray voarasarasa antsy | NewsMada
Mirongatra ny fitsaram-bahoaka any : Morondava Efatra maty, iray voarasarasa antsy
Efatra tamin’ireo jiolahy fito tratran’ny fokonolona nangalatra lavanila, tany Sambava no matin’ny fitsaram-bahoaka. Nisy iray hafa koa voatondro ho nangala-jaza, naratra mafy voarasarasa antsy.
Mirongatra ny fitsaram-bahoaka any Sambava. Olona efatra voalaza fa jiolahy no matin’ny olona tany amin’ny tanàna antsoina hoe Mahasoa Bemarivo Ambony, ny alatsinainy alina teo. Mpanagalatra lavanila izy ireto. Fito lahy izy ireo no saika hangalatra lavanila amin’ny tokantrano iray. Niantso vonjy ny tompon-trano ka nivoaka ny fokonolona. Nifandona tamin’ireto fito lahy izy ireo. Mafy ny fifandonana ka maty tamin’izany ireo efa-dahy raha tafaporitsaka ny telo lahy. Eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ny raharaha.
Ankoatra izay tany an-toerana ihany, resaka hala-jaza. Niteraka fitsaram-bahoaka tany Sambava ity resaka ity ny alatsinainy teo. Lehilahy iray voalaza fa nangala-jaza niharan’izany, ary norasarasain’ny olona ny antsy. Tsy maty ity tovolahy niharan’ny fitsaram-bahoaka tany Sambava na voarasarasan’ny antsy aza, fa kosa mbola manaraka fitsaboana any amin’ny hopitaly Sambava amin’izao fotoana izao. Araka ny fanazavana azo, tany amin’ny tanàna antsoina hoe Antsahalava Beanantsindra no nisy zazalahikely vao 5 taona nisy nisy nitondra an-tsokosoko, ny alahady teo. Tsy hita io zaza io nanomboka teo. Nisy olona nilaza anefa fa nahita lehilahy iray nitondra ilay zazalahikely io.
Nanao ny fanarahan-dia ny fokonolona ka tratra tany Antanambao Mahadera ilay lehilahy voatondro ho nitondra ilay zaza ny alahady io ihany, tokony ho tamin’ny 7 ora alina. Nentina niverina tany Beanantsindra izy io ary nofatorana nandrasana ny alina. Ny alatsinainy vao mangiran-dratsy anefa, votsotra izy io ary afaka tamin’ny tady nifatorany. Nandrasana kartie mobily roa lahy, ka voalaza fa ny dadany ihany ny iray. Nambara fa tovolahy efa mpiray monina amin’ilay zaza ihany koa ity voatondro ho nangala-jaza ity.
Tezitra ny fokonolona nandeha nikaroka azy io, ka ny alatsinainy hariva tamin’ny 4 ora no tratran’ny olona tany Ambalafary Beanantsindra ilay tovolahy. Niharan’ny hatezeram-bahoaka izy io, ary norasarasain’ny olona tamin’ny antsy. Naratra mafy io io vokatr’izany ka naterin’ny olona tany amin’ny kaominina Bevontro naiditra hopitaly.
Nametraka fitarainana tany amin’ny ben’ny Tanàna ny fianakavian’ilay zaza very ary nitsoaka any Sambava noho ny tahotra valifaty. Voalaza mantsy fa tonga maro tao an-tanàna ny fianakavian’ilay tovolahy voatondro ho mpangala-jaza io, ary mihevitra ny hanao valifaty.
Olana eo amin’ny fiaraha-monina
Anisan’ny olana eo amin’ny fiaraha-monina ny ity hala-jaza ity izay efa niteraka fitsaram-bahoaka toy ny tany Anosy be, ka nahafatesana teratany vahiny. Tsy mbola voaporofon’ny mpitando filaminana ny tena fisiany, fa hatramin’ny tsaho mampisahotaka momba azy io, na teto an-drenivohitra aza.
Ny tranga mety misy, fa ny fanazavana avy amin’ny mpitandro filaminana mba hilaminan’ny olona no tsy ampy. Ity tany Sambava ity, fitsaram-bahaoka izay mety tsy mari-pototra loatra ny fiampangana olona, ary izao miteraka valifaty izao. Milaza ny mpitandro filaminana fa manokatra ny fanadihadiana momba ity raharaha ity.